C/qani siciid carab Oo Loodoortay Gudoomiyaha Xiriirka Kubada Cagta Somaliyeed +COD+SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
C/qani siciid carab Oo Loodoortay Gudoomiyaha Xiriirka Kubada Cagta Somaliyeed +COD+SAWIRO
Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtey Doorashadii 6-aad ee xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya, taasi oo ay goob joog ka ahaayeen mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga, Guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS iyo xubno kale.
Doorashada kahor ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigey waxqabadka xiriirka mudadii afarta sanno ee lasoo dhaafay, iyadoo sawiro iyo muqaalo lagu soo bandhigey tartamadii la qabtey mudada afarta sano ee la soo dhaafay, ka qeybgalka tartamo caalami ah ee dalka dibadiisa ka dhacay, qabashada tartanka degmooyinka, kan horyaalada heerarka kala duwan, tababarada garsoorka iyo kuwa kale.
Intaas kaddib waxaa la guda galay aqrinta Musharixiinta Guddoomiyenimada Xiriirka oo marka hore ay u sharaxnaayeen Guddoomiyihii xilkaa si hayey Cali Siciid Guuleed iyo Xoghayihii xiriirka C/qani siciid carab, hase yeeshee Cali Siciid Guuleed ayaa halkaasi ka sheegay inuu ka tanaasuley musharaxnimada, isagoo codsadey in la cafiyo mudadii uu xilka hayey qaladaadkii ka dhacay.
Waxaa halkaasi cod gacan taag ah loogu qaadey Musharax C/qani Siciid Carab, iyadoo halkaasi ay fadhiyeen 25-kooxood ee codeynta leh iyo sadexda urur, waxaana si aqlabiyad leh cod gacan taag ah ay ku doorteen 28-kii cod ee halkaa joogtey.
Sidoo kale waxaa loo tartamay guddoomiye-kuxigeenada xiriirka oo 3 musharax isu soo taageen waxayna kala ahaayeen: Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino, Cabdullaahi Sheekh iyo Cabdullaahi Abow Xuseen, iyadoo labo kaliya ah loo baahnaa, ,waxaana guddoomiye ku-xigeenka 1-aad kusoo baxay Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino oo helay 28 cod, ku-xigeenka 2-aad waxaa galay Cabddullaahi Sheekh oo helay 23 cod.
Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga Cismaan Daallo iyo Gudoomiyaha GOS C/laahi Axmed Tarabi, kuwaasoo u hambalyeeyey gudoonka cusub ee xiriirka, iyagoo ka codsadey iney ka shaqeeyaan horumarinta cayaaraha, ayna la xisaabtami doonaan waxqabadkooda.